Nka na ụzụ Nkwado - Lanlin Printech
Anyị na-raara nye aza ahịa 'mkpa n'oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla, ị nwere ike mgbe niile kpọtụrụ anyị na gị mma site na ekwentị, Email, Skype ma ọ bụ ọ bụla ọzọ n'aka.
Anyị ọkachamara oru injinia ga-achọ iji nye gị ọrụ dị ka n'oge na-adịghị dị ka o kwere. Otú ọ dị, iji mma-enye ọrụ gị na-esi na nsogbu edozi, biko eziga anyị kpaliri ikwu ebi si full info na efere, foto, na njehie informations.
Shenzhen Lanlin Printech Co., Ltd 's ọzụzụ saịtị nke na-dị na China, na-enye ohere niile na-ebi akwụkwọ. Trainees na-enwe ike na-enweta aka-na na ahụmahụ na ngwa nbipute, na-amụta isi mmezi na ime ihe na a na-achịkwa gburugburu ebe obibi.
Ọ bụrụ na ị na-enwe ike inyere anyị aka na-na-visa na-ga-achọ ibu na-akwụ ụgwọ ihe dị ka ụgbọ elu tiketi, obodo ụlọ, etc, anyị nwere ike izipu anyị ẹkesikpede gị ụlọ ọrụ, na-enye gị a free echichi na ọzụzụ maka dị ka ogologo dị ka ị maara otú na-arụ ọrụ ya.
Ọ bụrụ na ị ka na-enweghị afọ ojuju na ọrụ site na obodo ndị nkesa, biko kpọtụrụ anyị.
Adress: Ft 1st, Xilibao Building, Lianhua Road 130, Buji Town, Longgang District, Shenzhen City, China, 518112.
Ekwentị: +86 159 0945 5710